काठमाडौं महानगरपालिकाले गर्यो यति ठुलो निर्णय,उपत्यका बासिलाइ यति ठुलो राहत — Imandarmedia.com
१नेपाली भौतिकशास्त्री साहुले अमेरिकामा पाए साढे ३ करोडको अवार्ड
२संसद सचिवालयमा कार्यरत उपसचिवको कोरोना संक्रमणबाट निधन
३नगरपालिकाले गर्यो यति ठुलो निर्णय, संक्रमितलाई निःशुल्क उपचार, एम्बुलेन्स फ्री
४घनश्याम र योगेशलाई फकाउने ओलीको प्रयास असफल
५एकाएक गृहमन्त्री रामबहादुर थापा हेलिकोप्टर चढेर किन पुगे हेटौंडा
६बादललाई बनाए राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवार
७ओलीसँग कुनै सहमति भएको छैन, भ्रममा नपर्नुस् : माधव नेपाल
८प्रधानमन्त्री ओलीसँग घनश्याम र योगेशको मध्यरातसम्म वार्ता, के बिषयमा भयो छलफल
९बागमती प्रदेशमा सक्रिय संक्रमितको संख्या ३६ हजार भन्दा बढी
१०सबै देशका उडान बन्द, भारतसँग मात्रै किन खुल्ला ? यस्तो रहेछ कारण
११सरकारले साढे ६ हजार अक्सिजन सिलिण्डर जफत , कहाँ-कहाँ बाँडिदैछ ?
१२एमालेका शीर्ष नेताहरुको बैठक बालुवाटारमा बस्दै,
काठमाडौं महानगरपालिकाले गर्यो यति ठुलो निर्णय,उपत्यका बासिलाइ यति ठुलो राहत
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले कोभिड-१९ बाट संक्रमितहरुको उपचारका लागि ‘कोभिड अस्पताल’ सञ्चालनको गृहकार्य थालेको छ । महामारी सुरु भएको एक वर्षपछि महानगरको कार्यपालिका बैठकमा पहिलो पटक कोभिड अस्पताल सञ्चालनबारे छलफल भएको हो ।
महानरका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यको अध्यक्षतामा बसेको ६१ औं कार्यपालिका बैठकमा ‘कोभिड-१९ महामारी व्यवस्थापन’ सम्बन्धमा राखिएको प्रस्तावमा छलफल गर्दै सुविधा सम्पन्न आइसोलेसन र कोभिड अस्पतालको उपयुक्त विकल्पसहितको प्रस्ताव पेश गर्न वडा ३ का अध्यक्ष दीपक केसीको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।
समिति गठनपछि बैठकका अध्यक्ष एवम् प्रमुख शाक्यले गएको वर्षभन्दा यसपटक अवस्था फरक भएको बताए ।‘शंका भएका व्यक्तिलाई जाँच गराएर क्वारेन्टिनमा बस्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने, पर्याप्त आइसोलेसन वार्डहरु तयार गरिनुपर्ने र महानगर आफैंले कोभिडको अस्पताल नै बनाउनु पर्ने भएको छ,’ उनले भने,’ क्वारेन्टिन निर्माण गर्ने, आइसोलेसन बनाउने र आवश्यकताका आधारमा अस्पतालसम्म बनाउने प्रयोजनका लागि हामीले महानगरभित्र होटल, पार्टी प्यालेस, स्थापना भएर चलेका र नचलेका केही अस्पतालहरुको अवलोकन गरेका छौँ ।’
केही प्रस्तावहरु पेश भएको उनले बताए । प्राप्त भएका र छलफल गरिएका विभिन्न ढाँचामध्ये कुन उपयुक्त हुन्छ भनेर अध्ययन हुने उनले बताए ।
समितिले आइसोलेसन सञ्चालन वडा तहबाट गर्ने कि महानगर तहबाट गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सुझाव दिनेछ । जटिल स्वास्थ्य समस्या भएकालाई उपचार गर्न आवश्यक उपकरणसहितको उपचार कक्ष निर्माण गर्ने विषयमा सिफारिस पनि गर्नेछ ।
‘पूर्वाधार र जनशक्ति भएका स्वास्थ्य संस्थासँग सहकार्य गर्न पाइयो भने छिटै सेवा व्यवस्थापन गर्न पाइन्छ,’ प्रमुख शाक्यले भने ।
बैठकमा गएको वर्ष १० करोड रुपैयाँ राखेर स्थापना गरिएको कोभिड कोषबाट करिब ५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको, एम्बुलेन्स सञ्चालनका लागि संयुक्त एम्बुलेन्स चालक संघसँग सहकार्य थालिएको जानकारी गराए ।
महानगरले तर्जुमा गर्ने महामारी नियन्त्रणका कार्यक्रममा डा. गणेश गुरुङ्, डा. अर्जुन कार्की, डा. अनुप सुवेदी र डा. सरद वन्तलाई स्वास्थ्यविज्ञका रुपमा आमन्त्रण गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
आजको बैठकले, ‘मानव बेचविखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) स्थानीय समिति गठन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि-२०७८’ र ‘छात्रवृत्ति कार्यविधि – २०७८’ तर्जुमा गर्न सहमति दिएको छ ।
यस्तै छत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालय र ब्रहृमकुमारी राजयोग सेवा केन्द्रको भवन नक्सा पास दस्तुर मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप ७ हजार ४४८ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.जागेश्वर गौतमले देशभरका विभिन्‍न प्रयोगशालामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा ७ हजार ३८८ र एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा ६० जनामा कोरोना पुष्टि भएको जानकारी दिएका हुन् ।
यसैगरी आज थपिएका संक्रमित सहित नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या ५४ हजार ४१ पुगेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यसैगरी पछिल्लो २४ घण्टामा ३७ जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ । योसहित ज्यान गुमाउनेको संख्या ३३ सय ६२ पुगेको छ ।